First Bitcoin Ngwuputa ụlọ ọrụ depụtara na Tel Aviv ngwaahịa mgbanwe - Blockchain News
Canadian cryptocurrency Ngwuputa ike Bitfarms dechara ya mmakọ na Tel Aviv-depụtara ụlọ ọrụ tụgharịa kaadị Ngwuputa ụlọ ọrụ Blockchain Mining Ltd., mara ọkwa na a ịgba akwụkwọ na Tel Aviv Stock Exchange Sunday.
Mmakọ emepụta mbụ ụlọ ọrụ na cryptocurrency dị ka ya isi azụmahịa na-depụtara na mgbanwe.
The abụọ na ụlọ ọrụ mbụ mara ọkwa mmakọ ndibiat-na atụmatụ depụta na Tel Aviv Stock Exchange dị ka a kaadị-okowụk ụlọ ọrụ na-na December 2017, ma chere ihu nnyocha si Israel regulator. na March, ụlọ ọrụ mara ọkwa na Israel Securities Authority ama dechara ya nchoputa n'ime mmakọ.
Bitfarms arụ ọrụ anọ ụlọ ọrụ na Québec ógbè na-ugbua ewu a ise Mgbakọ center.
CFTC oche: dị mkpa ka anyị na-akwanyere ọgbọ ọhụrụ Ịnụ ọkụ n'obi maka digital ego
N'oge Tuesdays Cong ...
Kodak na-aga ịkpọ sec ka chọpụta ọnọdụ KODAKCoin
Bitcoin trading na Indonesia setịpụrụ outpace ngwaahịa trading
Previous Post:Coinsource na-gbapụ Bitcoin ATMs
Next Post:MasterCard eji blockchain agha adịgboroja NJ